Home / मनोरन्जन / ‘हैरान’को ‘हिरो’ गीत रिलिज, को-को बन्न खोज्दैछन् हिरो ?
‘हैरान’को ‘हिरो’ गीत रिलिज, को-को बन्न खोज्दैछन् हिरो ? 0
जेठ ४ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको चलचित्र ‘हैरान’को दोश्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । यो गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु गजित बिष्ट, निश्मा घिमिरे, वुद्दि तामाङ, सागर लम्साल र पुस्कर रेग्मीलाई फिचरिङ गरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको ‘हिरो’ गीतमा संगीत र स्वर राजन इशानको छ भने गम्भिर बिष्टको शब्द छ । चलचित्रको परिस्थिती अनुसारको गीत रहेको गम्भिरको भनाई छ । यो चलचित्रलाई विश्वकै कान्छा निर्देशक सौगात बिष्टले निर्देशन गरेका हुन् ।
यो चलचित्रमा सत्यराज आचार्य , गजित विष्ट , मोहमद वसिम राजा , सागर लम्साल, निश्मा घिमिरे , सरोज खनाल , बुद्धि तामाङ , पुष्कर रेग्मी , एन्जल राई ,आरोही शर्मा लगायतका कलाकारलाई देख्न सकिन्छ ।
डान्स फेभरको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा मुक्ति घले , सृष्टि घिमिरे , डाक्टर वाई एल लामा निर्माता रहेका छन् भने सम्झना पोखरेल कार्यकारी निर्मात्री रहेकी छिन् ।